Ukwahlukana | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Meyi 18, 2007 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Kuthekani ukuba sithandana nabantu abanjengokuba sibathengisile? Ingahamba into enje…
Ingcebiso yomnqwazi ku Mack kwibhlog yentsholongwane.
tags: NkonzoZorhweboUkujongwa kwabathengiUkujolisa kumthengiukutshataUkujoliswa kwabantulwabantuIvidiyo ehlekisayoezihlekisayoekujoliswe kuyoUkwahlukana
Elona nqaku lililo endakha ndalifumana kwiBhlog yam
Kutheni le nto abathengisi bengabalekeli eJaiku?
Meyi 19, 2007 kwi-1: 12 AM
Ndizakukongeza kuluhlu lwam koku kufunyanwa. Ukuhanjiswa okugqwesileyo.
Meyi 19, 2007 kwi-1: 54 AM
Phantastic, iphulo elitsha. Ukusuka kwi-MICROSOFT!
Kwaye kunomdla kakhulu ukubona ifomathi entsha - i-intanethi kuphela, oku kuthetha ukuba unokuxelela amabali amade ngaphandle kwesohlwayo kwiindleko.
IMicrosoft isanda kuba yinto embi encinci 😉